Jamie Kennedy dia nihetsika tamin'ny tranofiara 'Scream' vaovao - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Jamie Kennedy dia naneho hevitra tamin'ilay horonantsary vaovao 'Scream'
Jamie Kennedy dia naneho hevitra tamin'ilay horonantsary vaovao 'Scream'
Mila tia ny fitiavany an'i Leprechaun
by Trey Hilburn III Oktobra 22, 2021
by Trey Hilburn III Oktobra 22, 2021 6,562 hevitra
Jamie Kennedy's Randy dia ampahany lehibe tamin'ny Scream's lore. Ny monologue nataony izay nifanaraka tamin'ny fitsipiky ny slashers dia nanako ny tantaran'ny horonantsary hatramin'ny tranofiara voalohany hatrany amin'ny Deputy Dewey mitanisa ny ampahan'ny dinika nataony tao amin'ilay tranofiara vaovao. Ny trivia be fitiavana an'i Randy dia hiaina mandrakizay amin'io lafiny io.
Nipetraka i Kennedy ary nijery ny niantsoantso tranofiara hanome horonantsary fanehoan-kevitra ho hitan'ny rehetra. Nandritra ny fandehan-dahatsary, mazava ho azy fa faly i Kennedy amin'ny feo azon'ilay vaovao. Mazava ho azy, azonao atao ny milaza fa manjavozavo koa izy fa tsy eo intsony i Randy… fa tamin'ny fanambarana vao tsy ela izay dia nanaiky ihany koa i Kennedy fa mieritreritra izy fa tsara kokoa ny tsy hiverenan'i Randy. Tokony hiombon-kevitra aminy isika.
Ny valinteniny dia nifototra tamin'ny tsaho momba ilay namana niantsoantso alum, Matthew Lillard dia hiverina amin'ny fahaiza-manao amin'ny fidirana farany an'ny niantsoantso.
Ny iray amin'ireo zavatra tsara indrindra avy amin'ny horonantsary dia ny fitiavana neken'i Kennedy Leprechaun. Tianay koa ilay zazalahy kely, ka ny nandrenesana izany dia vilany volamena ho anay.
niantsoantso mitsivalana amin'ny sinema manomboka amin'ny 14 Janoary 2022. Tsy andrintsika ny hipetrahana amin'ny teatra feno olona amin'ity.